Maamulka Kooxda Borussia Dortmund oo war kasoo saaray dalabka Arsenal ee Julian Brandt
Home Horyaalka Germalka Maamulka Kooxda Borussia Dortmund oo war kasoo saaray dalabka Arsenal ee Julian...
Dortmund's German forward Julian Brandt shoots the ball during the German first division Bundesliga football match Werder Bremen v Borussia Dortmund in Bremen, western Germany, on December 15, 2020. (Photo by Patrik Stollarz / various sources / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by PATRIK STOLLARZ/POOL/AFP via Getty Images)
Agaasimaha kooxda Borussia Dortmund Michael Zorc ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka xanta ah ee sheegaya in Arsenal ay dalab ka gudbisay Julian Brandt.
Wararka ka imanaya Jarmalka ayaa sheegayay in Dortmund ay diyaar u tahay inay amaah ku dirto 24 jirkaan, laakiin Zorc ayaa ku adkeysanaya inaan wax dalab ah laga soo gudbin.
Sida laga soo xigtay saxafiga Fabrizio Romano bogiisa rasmiga ah ee Twitter , Zorc wuxuu yiri: “Ma jiraan wax miiska saaran waqtigaan.
“Waxba kama qaban karno wararka xanta ah ee had iyo jeer la faafiyo oo aan runta ka turjumayn. Ma jiraan wax xiise ah oo hadda socda. ”
Inkastoo ciyaaryahanka khadka dhexe uusan haatan boos joogto ah ka heysan Dortmund, waxaa la fahamsan yahay in kooxda ay weli ku rajo weyn tahay inuu ugu dambeyn soo bandhigi doono qiimahiisa.
Brandt wuxuu ku bilaabay bilow wanaagsan kooxda Bundesliga, laakiin wuxuu markii dambe ku dhibtooday inuu soo saaro qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa.
Previous articleManchester United oo dhameystirtay heshiis 37 milyan oo ginni ah oo ay kula soo saxiixaneyso xiddigga Atalanta Diallo
Next articleFalaqeynta Kulanka Aston Vila Vs Liverpool ee FA Cup-ka xili Shaki uu ku jiro kulanka